को दराज को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व को एक पन्जा छन्। तिनीहरूले अप्रिल गर्न अक्टोबर छन् (र देश को केही क्षेत्रहरु, र अधिक) कटु मौसम अवस्था हाम्रो हात सुरक्षा गर्न। साथै, पन्जा एक आभूषण रूपमा सेवा र सुट पूरक। सुरुचिपूर्ण हेर्न हात गर्न, तपाईं सही छनौट गर्न आवश्यक आकार पन्जा।
हात मा, तिनीहरूले "skukozhivaetsya" पर्ची र छैन, एक पन्जा जस्तै बस्न छन्। तर पनि साँघुरो पन्जा तिनीहरूले seams मा दरार सक्छ, लगाएका समयमा बेचैनी ल्याउनेछ।
को को आकार कसरी निर्धारण गर्न पन्जा?
पन्जा आकार को प्रतीक एस-एम-एल-लार्ज उपयोग, फ्रान्सेली इन्च, सेन्टिमिटर निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, आफ्नो आकार गणना गर्न धेरै तरिका छन्।
मा इन्च फ्रान्सेली आकार
बाहेक हत्केलामा को मंडल मापन गर्ने औंठी लगभग औंलाहरु को हड्डी मा, आफ्नो फराकिलोकालागि बिन्दुमा। परिणामस्वरूप मूल्य मिलिमिटरमा सेट गर्नुपर्छ र 27 द्वारा विभाजित, परिणाम 0.5 लागि गोल छ। यो सही आकार पन्जा हुनेछ।
शासकहरूले र एकदम अक्सर टेप उपाय इन्च मा वर्तमान मात्रा प्रभाग, तर यो पाम को girth मापन गर्न असम्भव छ। यो ब्रिटिश इन्च। पन्जा को आकार गणना गर्न तिनीहरूले उपयुक्त हो।
मापन girth रूपमा माथि वर्णन ब्रश, हातमा अलिकति बाङ्गो गर्नुपर्छ। सेन्टिमिटर परिणाम परिणामस्वरूप एक पूर्णांक लागि गोल छ। महिला सामान्यतया आकार 17-30 मा उपलब्ध छ, चलिरहेको पुरुषहरु को आकार पन्जा - 20-32। मानक भन्दा ठूलो वा सानो आकार क्रममा सी छ।
पन्जा आकार एस को मंडल गर्न पत्राचार हात को 17-18 सेन्टिमिटर र 8 सेन्टिमिटर मा मध्य औंला को एक लम्बाइ।
18-19 सेन्टिमिटर पाम, 8.5 सेन्टिमिटर को मध्य औंला - आकार एम पन्जा।
पन्जा आकार एल - 19-20 सेन्टिमिटर, बीचमा औंला 8.7 सेन्टिमिटर को पाम।
पन्जा आकार लार्ज - 20-21 सेमी हात, मध्य औंला9सेन्टिमिटर।
तर तिनीहरूलाई प्रयास बिना पन्जा किन्न तपाईं आवश्यक आकार मा निर्णय गरेका छौं भने पनि, यो मूल्य छैन। हात सबै मानिसहरू अलग हो, र पन्जा औसत मानक गर्ने सिलना छन्।
पन्जा कसरी लगाउन?
पन्जा विश्वासीपूर्वक धेरै वर्ष को लागि आफ्नो मालिक सेवा गर्न, त्यहाँ सही आकार चयन गर्न साना छ। तपाईं ठीक पन्जा लगाउने कसरी सिक्नुपर्छ। तपाईं ब्रश मा एकैचोटि सबै सामान सक्दैन, यो stretching र छाला को विरूपण नेतृत्व हुनेछ। पहिलो, तपाईंले आधा पन्जा वोल्ट नट आदि खोल्नु र यो चार औंलाहरु धारण गर्नुपर्छ, त्यसपछि बिस्तारै यो औंठी loosen र यसको ठाउँमा घुसाउनुहोस्। अब तपाईं ध्यान दिएर सबै भाग र चिल्लो पन्जा हात रोल्ड ठाँउ मा फिर्ता राख्न सक्नुहुन्छ।
पन्जा चयन भएपछि अरू के हेर्न?
साँचो छाला - पन्जा लागि सबै भन्दा राम्रो सामाग्री। छाला को पन्जा स्टाइलिश र मेहनत लगाएर छन्। यो सामाग्री पन्जा बाट छनौट, छाला को सानो टुक्रा बाहिर कटौती छन् ती खरिद छोड्न। धेरै seams को पन्जा एक गर्दा मोजा उत्पादन पछि, पर्याप्त सुत्छन् गर्न आकार, खंड पनि टियर गुमाउन सक्छन् रोक्न।
तपाईँले किन्न अघि, तपाईं seams र सूत्रहरू गुणस्तर हेर्न पर्छ। अस्तर बिना पन्जा तिनीहरूले हात फोहोर प्राप्त हुनेछ निश्चित गर्न, एक ऊतक वा रुमाल को भित्र RUB गर्न आवश्यक छ।
चलचित्रहरू जाँदै छ के: उत्पादन गर्न outfit चयन?
समुद्र द्वारा छुट्टी मा वस्त्र: यो के हो?
Sundress सनी - यो गर्मी गर्मी मा एक godsend
निश्चित सम्पत्ति मूल्यांकन। मूल्यांकन र वर्गीकरण को प्रकार
Conjunctivitis। उपचार र रोकथाम